We Fight We Win. -- " More than Media ": သဘ၀ပတ်ဝင်းကျင် သတင်း
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်များထံသို့အကြံညဏ်တောင်းခံခြင်း
မိတ္ထီလာမြို့နယ် ၊ ကျောက်ဖူးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကျောက်ဖူးရွာ မှာ သဘာဝ က ပေးတဲ့ လက်ဆောင် ရေချိုစိမ့်တွင်း ၊ ရိုးချောင်း က ရွာ ကို ပတ်ပြီးစီးဆင်း ပါတယ်.... တရွာလုံး ရိုးချောင်းက
ရေ ကို အားထားနေရပါတယ်အခု နေ ချိန် မှာ အဖိုးတန် ရေချို အရင်းအမြစ် ပျောက်ပျက်ဆုံးရှုံး မှာ စိုးတဲ့ အတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင် များ
ရွာသူ ရွာသား များ အား အသိပညာပေး ရန်လိုအပ် နေပါသဖြင့် ကူညီပေးကြပါရန် တောင်းခံအပ်ပါတယ် ....
Don't let them use it. Sold it to chinese company.